6 Makiyi eTekiniki Maitiro muMedia uye Varaidzo Indasitiri - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Media uye Varaidzo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
6 Key Tech Maitiro muMedia uye Varaidzo Indasitiri
Pane imwe nguva vanhu vaigara vachidziya moto uye vachipedza nguva vari pamwe chete. Nguva inoshanduka, vanhu vakashanduka uye tekinoroji yakakwira. Ipapo, pakanga paine nhamba shoma yemoto wemisasa panzvimbo yekuti vanhu vagare mukamuri yavo yekutandarira vakatenderedza chidimbu chevaraidzo chinozivikanwa se - terevhizheni. Tekinoroji inowedzera uye ikozvino, vanhu vanopinda mune yavo smartphone skrini uye unakirwe nechidimbu chavo chavanoda chevaraidzo show.
Mhedziso yese yekufambira mberi iyi ichakutora iwe kune imwechete izwi irikuchengeta munhu wese akasungirirwa kuzvigaro zvavo - kutenderera. Kunyangwe iri odhiyo kana vhidhiyo midhiya, kutenderera kunogara kuripo. Muna 2017, yakanga ichikura uye muna 2018, tichaona vhezheni yepamusoro yeiyi tech. inofungidzirwa kuve yekutanga mutyairi mutyairi iyo iri kuchinja nzira iyo vatengi vakashandura nzira iyo zvirimo zvinoratidzwa. Zvino, maartist nemaindasitiri ari kupa midhiya kune fan yavo pane sirivheri mundiro.
Kufarira mukufambira mberi kwetekinoroji muindasitiri yenhau? Tora mushumo wedu izvozvi.
1. Kudhaunirodha Dhijitari Music
Tese takadhawunirodha digital media pane yedu smartphone ndokuzvichengeta pane micro memory chip. Nekutenderera, chinhu chachinja uye chave nyore. Iko hakuna rocket sainzi yekupokana chikonzero. Kuchinja kwakaitika nekuti iko zvino zvave kugoneka kuteerera nziyo dzemamiriyoni gumi nekubhadhara mutengo wekudhawunirodha rimwe chete redhijitari.
Vateveri vemimhanzi vari kutora mukana wakazara webasa iri nekuchinjira kune zvinoshandiswa zvinopa masevhisi akadaro. Vanenge mamirioni zana evashandisi ikozvino vanyorerwa kumasevhisi akadaro uye iyo nhamba ichiri kukwira. Izvi zvinobatsira kune yakanyorwa mimhanzi indasitiri zvakare sezvo mari iri kuwedzera nekukurumidza. Iwo ari mari inotambira ye100 muzana purofiti kubva kune yekumhanyisa tekinoroji chete.
Read More: 5 Nzira Blockchain ichavhiringidza Chinyakare Media
2. Vhidhiyo Kutenderera
Vhidhiyo kutenderera iri kuwedzerawo pamwero unoshamisa uye pamusoro peiyo, haina zano rekudzikira. Kana paine chero chinhu, isu tichaona yakakwidziridzwa vhezheni yeiyi tech munguva pfupi iri kutevera. Izvo zvinofungidzirwa kuti mari yekushambadzira yevhidhiyo ichave yakapetwa katatu ne2021. Vatengi vari kufamba vachienda kunyorera foni kweterevhizheni iyo inoshandiswa zvakanyanya kutepfenyura mavhidhiyo. Ichasangana nemusika wakakura kwazvo wekukura kwemusika uyo unongowanda pamwe nedanho redhijitari chikuva icho chinoshandiswa zvakanyanya kushambadzira nekumaka zvigadzirwa.
Kutenderera kuri kuwedzera zvakanyanya kuparadzirwa kwedhijitari kuri kugadzira mikana mizhinji yevanouya vakazvimirira maartist. Iyo mimhanzi uye vhidhiyo yekuparadzira yatora imwe nzira yakanangana nekuwedzera uye yakavhura mikova kune maartist kuti vawane zvakasarudzika kutarisisa. Hapasisina, pakahwanda kuseri kwechikuru zita.
Read More: Chii chinonzi Injini Inokurudzira uye Maitiro Ekuishandisa?
3. Nyika-Inotungamirwa Nyika
Kutenderera uye nyika yedhijitari iri kutonga chikamu chevaraidzo pasirese pasirese. Izvi zvakakonzera kukura kwedata. Sezvambotaurwa pamusoro apa, kutenderera kwakakwanisa kuve mutyairi wekutanga wemari yevhidhiyo nemumhanzi. Ichi chikonzero chiri nyore chakaita kuti zvive zvakakosha kushandisa dhata uye maitiro ehunyanzvi kuti uve nechokwadi chekubudirira.
Read More: Sei pamusoro midhiya dzimba inoshandisa data?
4. Kufambira mberi kwetekinoroji
Hapana mubvunzo kuti kufambira mberi kwetekinoroji kuri kuenderera nekukurumidza. Izvi zvachinja kumeso kwemaindasitiri enhau sezvo pfungwa iri kusimudzira, maartist ari kukura uye vatengi vanovimba zvakanyanya nekushandisa. Zvese izvi zvinotenderedza chinhu chimwe chete pazvinotarisirwa zvese - dhata.
Izvo zvakakosha kuti uve nekunyatsonzwisisa kwemimhanzi data. Nekudaro, iyo indasitiri haina fungidziro, dhata inopa kugona kwavanogona kufanotaura uye kuwana chiratidzo kuchichiita chishandiso chine simba. Iwe haugone kuwedzera kukosha kwedata mune vezvenhau uye terevhizheni nyika. Dhatabhesi inosarudza izvo zvirimo uye kuendesa kuitwe kumutengi. Vanhu vari kugamuchira tekinoroji ichagadzira VR chinhu chakakosha chikamu chevaraidzo.
Read More: 5 Makwikwi Makomborero eBig Data Kuongorora
5. Kushandiswa kweData
Kana iwe uchida kudzidza nezve data-inofambiswa saka pane zvakawanda zvinhu izvo zvichave zvakabatanidzwa maitiro kusanganisira kushandisa michina, chakagadzirwa Intelligence (AI) uye machine learning. Nerubatsiro rwechikamu chakasiyana data, zvinokwanisika kuti uwane nzwisiso yakakodzera mune iyo data kuitira kuti makambani agone kuita sarudzo chaiyo. Hapana mubvunzo kuti vanhu vakakosha pakubudirira kwechero yakasimba asi kana yakawanda dhata ikabatanidzwa saka hazvigoneke kuvimba nebasa remaoko.
Nekudaro, michina inoshandiswa kuongorora iyo data pasina kuomarara kana kuremara. Kana zvisiri, saka iyo data inogona kukurira muongorori uye inogona kupa mhinduro dzakavhiringidzika. Iwe hauzove neruzivo pamusoro pezvaunoda uye hunhu hwemutengi.
Read More: Mashandisiro Ekushandisa Attribution Modeling yeMedia Insights
6. Ramangwana reKusika maindasitiri
Digital revolution yave panhongonya nerubatsiro rwetekinoroji apo vatengi vari kutambira mazano matsva ari kubatsira mukukura kwekushandiswa kwenhau. Izvi zviri kutowedzera kudiwa kwe smartphone pakati pevechidiki izvo zvinotarisirwa kunge zvakakwirira panosvika 2020. Nyika iri kushandisa pasi rose Mapuratifomu kubatanidza pamwe chete se evanhu vezvenhau uye internet. Izvi zvichawedzera kukura kwevagadziri vetekinoroji sezvo vachiuya nemamwe mazano.
Iko kuwana kune smart zvishandiso kwakakura pane dzakasiyana siyana senge maspika smart, mafoni, dzimba dzakabatana uye mota dzakabatana. Izvi zvinobvumidza vanhu kugara online chero nguva uye kubva chero kupi kusvikira vaine internet yekubatanidza. Ivo vanogona kuyerera mumhanzi, terevhizheni, kuverenga mabhuku, uye rondedzero inoenderera. Uku ndiko kushanduka kwekutanga mune hunhu hwevatengi uye kufambira mberi kwetekinoroji iyo yakwanisa kupomhodza kukura kwevhidhiyo nemimhanzi kutenderera. Yakawedzera kudiwa kwedata kuti ichinje zvisikwa uye nekuvandudza kutakura. Izwi-rinodzorwa tekinoroji ichaenda kutora pasi rese nemoto. Ichaunza hunyanzvi hwenyika pamberi nepamberi nerubatsiro rwemunhu kungobaya chigunwe kure.
Iko kune mukana wekuti mune ramangwana rakawanda rezve tekinoroji yedhijitari ichaunzwa mu Media uye Varaidzo chikamu chinozovandudza ruzivo rwevashandisi. Dhijitari midhiya ine mukana wekuvandudza kugona kwavo uye curate zvemukati kuendesa kuitira kutandadza vanhu muchiroto zviitike nenzira.
Unoda tech solution? Taura nekutaurirana.